Development Network for Immigrants ─ နိုင်ငံသားသစ်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရန်ကြိုတင်လေ့ကျင့်ပေးခြင်း
Data sourceCouncil of Agriculture, Executive Yuan, R.O.C.
၁. ပြည်သူများအလုပ်အကိုင်ရဖို့မြှင့်တင်ရန်နှင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်လိုသူကိုရှာဖွေဖြည့်စွက်ကူညီမှုအပေါ်အခြေပြုပြီး ကျေးလက်ဒေသလူ့အင်အားတက်ကြွလာစေရန် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကောင်စီက အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်နယ်၊ ခရိုင်(မြို့)အစိုးရ တို့အတူပူးပေါင်းကာ “ဆုလာဘ်ဖြင့် ပြည်သူများလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအလုပ်လုပ်ရန်အားသွန်းဖို့ စမ်းသပ်စီမံကိန်း” ကို စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်မည်။ ဤစီမံကိန်းတွင် စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းကာလအတွင်း နိုင်ငံသားသစ်များအား အဓိကလူအင်အားနှင့် တည်ငြိမ်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် စိတ်အားထက်သန်စွာပါ၀င်ဆောင်ရွက်ရန်ကြိုဆိုပါ၏။
၂. အထက်ပါစမ်းသပ်စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်လို့ သက်ဆိုင်ရာလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ပေးရန် ပျိုးထောင်စီမံကိန်းကိုရေးဆွဲထားသည်။ ဤစမ်းသပ်စီမံကန်းကိုစိတ်ဝင်စားသူများ နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုရှိရန်အတွက် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ စပါးအသီးအနှံ၊ မွေးမြူရေး၊ ရေထွက်ကုန်စသည့်လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးနှင့်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်သင်တန်းပေးပြီး အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသောကထိကဆရာအား လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနည်းပညာသင်ကြားရန်ဖိတ်ခေါ်ပေးမည်။ တက်ရောက်လာသူများ ရရှိလိုက်သော လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှုကို အနာဂတ်ကာလတွင် တိုင်းပြည်၏စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းရှေ့ဆောင်သူအသစ်တဦးအဖြစ် နေထိုင်ရာအရပ်ဌာနရှိစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းသို့ ဆက်လက်ကူညီပေးရန် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းခွင်သို့ဝင်ရောက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
၃. အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၏ စမ်းသပ်စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ဤဝဘ်ဆိုက်တွင် သက်ဆိုင်ရာသတင်းအကြောင်းအရာများကို အချိန်မရွေးအပ်ဒိတ်မည်။
၄. ပြည်တွင်းလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်သားအင်အားမလုံလောက်ခြင်းကြောင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလူ့အင်အားကို ရာသီအလိုက် လွှဲပြောင်းအသုံးချနိုင်ရန် “ကျေးလက်ဒေသ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း လူ့အင်အားတက်ကြွရန်စီမံကိန်း” ကို စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ကျေးရွာမြို့နယ်(မြို့)တောင်သူလယ်သမားအသင်းမှ ဒေသခံ သို့မဟုတ် ကပ်လျက်ဒေသရှိ တောင်သူလယ်သမားမိသားစုဝင်၊ ၎င်းတွင်နိုင်ငံသားသစ် ဒါမှမဟုတ် မူလနေထိုင်သူတို့လည်းပါ၀င်သည့် လူ ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကိုခေါ်သွင်းကာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့အစည်း ကိုုဖွဲ့စည်း၍ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာနည်းပညာလေ့ကျင့်သင်တန်းပေးပြီး လယ်သမားများ၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ စျေးကွက်တင်အဖွဲ့ သို့မဟုတ် တောင်သူလယ်သမားအသင်း စသည့်ဌာနတွင် ဒေသခံများအားအလုပ်ခေါ်ရန်ချိတ်ဆက်ကူညီပေးသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ဤစီမံကိန်းကို ဆက်လက်တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်မည်။
၅. နိုင်ငံသားသစ်များ တောင်သူလယ်သမား၏ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းများကို ၀ဘ်ဆိုက်တွင်အမည်စာရင်းပေးသွင်းလို့ရသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော သက်ဆိုင်ရာသတင်းအကြောင်းအရာများကို ဤကောင်စီ၏တောင်သူလယ်သမားတက္ကသိုလ်ဝဘ်ဆိုက်တွင်ကြေညာထားသည် (http://academy.coa.gov.tw/)။